आज २०७६ साल असार ९ गते सोमबार को राशिफल हेर्नुहोस – Hotpati Media
कला / मनोरंजन
प्रवास / एनआरएन
बिचार / विश्लेषण
विज्ञान / प्रविधि
आज: | Sun, 20, Jun, 2021
होमपेज / धर्म संस्कृति
आज २०७६ साल असार ९ गते सोमबार को राशिफल हेर्नुहोस
९ असार २०७६, सोमबार ०५:२७ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २९ मिनेट
वि.सं.२०७६ साल असार ०९ गते । सोमबार । ईश्वी सन् २०१९ जुन २४ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४१ । आषाढ कृष्णपक्ष । तिथि सप्तमी,४५ घडी ४४ पला,बेलुकी ११ बजेर २८ मिनेट उप्रान्त अष्टमी । नक्षत्र पूर्वाभाद्रपदा,४९ घडी ५९ पला,रातको ०१ बजेर ११ मिनेट उप्रान्त उत्तरभाद्रपदा । योग आयुष्मान,४१ घडी २१ पला,बेलुकी ०९ बजेर ४३ मिनेट उप्रान्त सौभाग्य । करण भद्रा,बिहान १० बजेर ३१ मिनेट उप्रान्त बव,बेलुकी ११ बजेर २८ मिनेट उप्रान्त वालव । आनन्दादिमा मुसल योग । चन्द्रराशि कुम्भ,साझ ०६ बजेर ३३ मिनेट उप्रान्त मिन । पञ्चक । काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर ११ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०७ बजेर ०१ मिनेट । दिनमान ३४ घडी ३६ पला ।
रुपैया पैसा कमाउँने काममा सहभागि हुन सकिनेछ । व्यावसायमा प्रसस्त आम्दानि हुँने हुँने तथा आम्दानिका स्रोतहरु बढेर जानेछ । पैत्रिक धन सम्पति हात लाग्ने योग रहेको छ । दाजुभाईबाट भने जस्तो सहयोग पाईने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुँनाले अरु भन्दा अगि आउँन सकिनेछ । साझपख लामो दुरिको विदेश यात्राको योग रहेकोछ ।
नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा बढुवा हुँने योग रहेकोछ । मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ भने कार्यक्षेत्रमा तपाईको कामको उच्च मुल्याङन हुँनेछ । बिद्यार्थि वर्गहरुले थोरै मेहनेत गर्दा पनि उत्कृष्ट नतिजा हात पार्नेछन् । गित संगित तथा मोडलिङ क्षेत्रमा ध्यान जानेछ । जस्तोसुकै व्यापार व्यावसायमा लगानि गर्दापनि भनेजस्तो आम्दानि हुँने हुँनाले थप लगानि गर्न आट आउँनेछ ।
लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ । भाग्यले साथ दिने हुँदा सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्ने हुँदा आफन्त तथा परिवारका सदस्यहरु खुसि हुँनेछन् । व्यावसायमा भनेजस्तो आम्दानि हुँने हुँनाले आर्थिक रुपमा सबल होईनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा गरिएको लगानिबाट सकारात्मक नतिजा आउँनेछ ।
चिताएको काममा बाधा हुने तथा सोचेजस्तो नहुनाले दैनिक कामगर्न गाह्रो महशुष हुनेछ । आफ्नै कारणले पढाई लेखाईमा अरुभन्दा पछि परिनेछ । घर परिवार तथा आफन्तबिच घरायसि कुरामा बिवाद निम्तिन सक्छ ध्यान दिनुहोला । कुनै योजना भए केहि समय थाति राख्दा राम्रो हुँनेछ । साझपख आफन्तको सहयोगमा लामो दुरिको यात्रा गर्न सकिनेछ ।
सिहं (मा,मी,मू ,मे,मो,टा,टी,टू,टे)
माया प्रेममा आम्मियताको बढोत्तरी हुँनेछ भने सामिप्यता बढेर जानेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा मनग्गे आम्दानि हुँनेछ । जीवनसाथि सँग रमाईलो यात्राको तय हुँनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । शरिरमा स्फुर्ति बढ्ने हुँदा जस्तो सुकै काम गर्नपनि जागर आउँनेछ । साझपख सवारि साधन चलाउदा ध्यान दिनुहोला ।
माया प्रेमको गाठो कसिलो हुँनुको साथै दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ । सत्रु परास्त हुँनेछन् भने न्यालयबाट हुँने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुँनेछ । पढाई लेखाईमा अरुभन्दा एक कदम अगाडि बढि नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । व्यापार व्याबसायबाट भनेजस्तो आम्दानि जीवन यापन सहज मार्गमा अगाडि बढ्नेछ ।
ईमान्दार तथा परिश्रमी भएर जीवनशैलिमा परिवर्तन ल्याउँन सकिनेछ । प्रेम तथा मित्रताको गाठो कसिलो हुँनुका साथै घर परिवारमा आफन्तसँगको सम्बन्ध थप प्रगाड बनाउँन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा थोरै समय दिदा पनि नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानि तथा व्यापार फस्टाएर जाने समय रहेकोछ ।
व्यापार व्यावसायमा केहि समय पर्ख र हेरको रणनिति अपनाउँदा राम्रो रहेकोछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसायलाई समय सापेक्ष आधुनिकिकरण गरि मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन रहने योग रहेकोछ । आमा तथा आफन्त सँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुँनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले पढाई लेखाईमा मन जानेछ भने नतिजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ ।
छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय हुँनेछ । उत्पादिन उद्योग तथा व्यावसायमा गरिएको लगानिबाट मनग्गे आम्दानि हुँने हुँदा बिलाशि जीवन व्यातित गर्न सकिनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्निबिचको मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ । बिद्यार्थि वर्गहरुले पढाई लेखाईमा भनेजस्तो सुधार गर्न सक्नेछन् । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउँने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ । साझपख आमा तथा आफन्त सँग मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ ।
थोरै बोलेर मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । कार्यक्षेत्रमा तपाईको निर्णयको उच्च मुल्याङन हुँनेछ भने समानमा सम्मानित जीवन यापन गर्न सकिनेछ । घर परिवार तथा जीवनसाथिको सहयोगले मन प्रफल्लित हुँनेछ । अध्यनमा प्रगति हुँने तथा खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा तपाईकै वर्चस्व कायम रहनेछ । कुटुम्वसँग मिलेर गरिने कुनै पनि काम फस्टाएर जानेछ । बहुमुल्य बस्तुहरु तथा धातुहरु जोड्ने समय रहेकोछ ।
व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन प्रसस्त समय खर्चिनु पर्नेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सहभागि हुने अवसर जुर्ने भएपनि सहकर्मीहरु बाटनै आलोचना खेप्नु पर्नेछ । पढाई लेखाईमा बाधा तथा अवरोधको सामना गर्नु पर्नेछ । घर परिवारमा एक अर्का बिच राय नमिल्ला कामहरु थाति रहनेछन् । साझपख समय राम्रो रहेकोले पुराना समस्या हल भएर जानेछ ।
बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ब्यापार ब्याबसाय भने फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानिबाट घाटा हुँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । बैदेशिक यात्राको प्रवल सम्भावना रहेको छ । बिद्यामा सफलता पाउँन निकै नै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ । माया प्रेममा धोका हुन सक्क सजग रहनु होला । साझपख समय राम्रो रहेकोले सामाजिक कामगरि नाम कमाउँन सकिनेछ ।
तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो?
धर्म संस्कृति सम्बन्धि थप
आज वि.सं.२०७८ साल असार ०६ गते आईतबारको राशिफल
आज वि.सं.२०७८ साल असार ०५ गते शनिबारको राशिफल
आज वि.सं.२०७८ साल असार ०४ गते शुक्रबारको राशिफल
आज वि.सं.२०७८ साल असार ०३ गते बिहीबारको राशिफल
टाउकोको ओखती नाइटोमा लगाएर हुन्न : बाबुराम भट्टराई
पहिरोले महाकाली राजमार्ग पुनः अवरुद्ध
अब दुई प्रकारको लाइसेन्स
रुसमा विमान दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु
आजको मौसम : केहि स्थानमा भीषण वर्षा
सेती नदीमा पानीको वहाब बढ्यो
पहिरोमा पुरिएर बझाङमा एकजनाको मृत्यु
अब निर्माण क्षेत्र र उद्योग पनि खुला गरिने
संविधानले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन : प्रधानमन्त्री ओली
बाढी पहिरोले १३ जिल्ला प्रभावित, २७ बेपत्ता, ६ जनाको मृत्यु
अर्को साताबाट ‘स्मार्ट लकडाउन’, निषेधाज्ञा खुकुलो हुने
डुबानमा परेकालाई उद्धारका लागि हेलिकोप्टरसहित २५० जना सुरक्षाफौज घटनास्थलमा
कोरियामा २७ बर्षिय पौडेलको मृत्यु
आठौ ईपिएस परीक्षाका परिक्षा केन्द्र तोकियो , कहाँ र कुन सिफ्टमा पर्नु भो हेर्नुहोस
कोरियामा औद्योगिक दुर्घटनामा परेर दुइ नेपालीको मृत्यु
प्रचण्डको अर्को लोकप्रिय कदम- कोरियाबाट पैसा पठाउँदा लाग्ने शुल्क अब सरकारले ब्यहोर्ने,हुण्डी पूर्ण रुपमा निरुत्साहित हुने
सिबिटी परिक्षा बन्द नभई स्थगित
कोरिया भाषा परिक्षा लागि ६८ हजारको आवेदन , औधोगिक र कृषिमा कति -कति आवेदन पर्यो
कोरियामा मजदुरको तलव १६.४ प्रतिशतले बढ्यो
कोरियन भाषा परिक्षा जेठको अन्तिम साता खुल्छ -ईपिएस कोरिया शाखा नेपालका निर्देशक बाबुराम खतिवडा
खुकुलो बन्दै निषेधाज्ञा
Tweets by HotpatiMedia
काठमाडौँ- रुसको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा भएको अवतरणका क्रममा धस्सिएर जहाज दुर्घटना भएको छ । सो दुर्घटनामा परी ९ जनाको ज्यान गएको रुसका... विस्तृतमा
भारतमा दैनिक संक्रमितको संख्या घट्यो
दक्षिण कोरियामा कोभिड-१९ को दोश्रो खोप लगाएपछि मृत्यु
धर्मपिताको कुटाई पछि दक्षिण कोरियामा १ महिना देखि कोमामा छिन् २ वर्षीया बालिका
चीन गान्सुमा रेल दुर्घटना, ९ को मृत्यु
दक्षिण कोरियाका विश्वविद्यालयहरूमा यौन दुर्व्यवहारको मुख्य अपराधी प्रोफेसरहरू हुन् : सर्वेक्षण
दक्षिण कोरियामा सहकर्मीद्वारा यौन दुर्व्यवहार भएपछि आत्महत्या
भारतबाट आएका ६५ दक्षिण कोरियालीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टी
दक्षिण कोरियामा कोभिड १९ को भ्याक्सिन लगाउदा जम्यो रगत
हटपाटी मिडिया हाउस प्रा.लि.
यति प्लाजा,बागबजार काठमाडौं, नेपाल
ईमेल: [email protected]
कार्यालय फोन- ०१६२०१४५३
स्थायी लेखा नम्बर-६०४३६५२९५
कम्पनी दर्ता नम्बर-१५९८५० /०७३-०७४
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: ८५ / ०७३-०७४
हटपाटी मिडिया हाउसका लागि
संचालक तथा सम्पादक देवेन्द्र सम्बाहाम्फे
सह सम्पादक निश्चल काउचा
कार्यकारी सम्पादक ऐश्वर्य श्रेष्ठ
सहायक सम्पादक सुर्य चन्द
विश्व आशिष सम्बाहाम्फे
खेलकुद सुरजसिं सुब्बा
ग्राफिक डिजाईनर सन्जोग देवान
कानूनी सल्लाहकार तेजबहादुर बस्नेत
मार्केटिङ रविन श्रेष्ठ
यो वेबसाईट हटपाटी मिडिया प्रा.लि.को आधिकारिक न्युज पोर्टल हो | नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरन्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका बिभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ |
© 2016 - 2021: Hotpati Media मा सार्बधिक सुरक्षित छ | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution